शीर्ष Health स्वास्थ्य लाभ रेसिभेट्रोल पूरकहरूको सब भन्दा विस्तृत comprehensive
घर > Resveratrol पूरकहरू
यदि तपाईं किन्नको लागि ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ भने Resveratrol पाउडर थोक मा, एक कम्पनी तपाईं अन्धाधुन्ध कच्चा माल सोर्सिंग को लागी विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ Cofttek हो। कम्पनीले आफ्नो कडा अनुसन्धान टोली र समर्पित बिक्री विभागको कारणले विश्वव्यापी उपस्थिति थोरै समयमै स्थापित गरेको छ - यसका ग्राहकहरू र विश्वव्यापी साझेदारहरू छन्। कम्पनीले उत्पादित रेसिभेट्रोल २ 25 किलोग्रामको ठूलो ब्याचमा आउँछ र उच्च-गुणस्तरका सामग्रीहरूबाट खनिन्छ, जसले यसबाट उत्पादित पूरकहरू गुणस्तर र प्रभावकारिताका लागि विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। यदि तपाईं बल्कमा रेसेराट्रोल खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने किनमेल गर्नका लागि मात्र ठाउँ छ cofttek.com.
हामीलाई रिसवेराट्रोल किन चाहिन्छ?
रेवेराट्रोलका फाइदाहरू के हुन्?
के Resveratrol तपाईको कलेजोको लागि राम्रो छ?
कलेजोमा कस्ता खाना कडा हुन्छन्?
म कसरी मेरो कलेजो कडा बनाउन सक्छु?
के Resveratrol किडनीको लागि राम्रो छ?
के बदामको बटरमा रिवेरास्ट्रोल छ?
के Resveratrol ले तपाईंलाई वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ?
Resveratrol छालालाई के गर्छ?
कुन मद्यमा रिभ्याराट्रोल सबैभन्दा बढी हुन्छ?
के रेवेराट्रोलले उर्जा बढाउँदछ?
के Resveratrol ले रक्तचाप कम गर्छ?
कुन खानाहरू रेवेरास्ट्रोलमा उच्च छन्?
कुन खानामा सबैभन्दा क्वेरसेटिन छ?
के रेवेराट्रोलले टेस्टोस्टेरोन बढाउँदछ?
यदि तपाइँ दिनहुँ किशमिश खानुहुन्छ भने के हुन्छ?
के तपाई धेरै रेवेराट्रोल लिन सक्नुहुन्छ?
के Resveratrol कम टेस्टोस्टेरोन?
के रेवेराट्रोल वास्तवमै काम गर्दछ?
Resveratrol ले तपाईंको अनुहारको लागि के गर्छ?
म प्रति दिन कति रेवेराट्रोल लिन सक्छु?
के रेवेराट्रोलले छाला लाई हल्का पार्छ?
कसरी तपाइँ तपाइँको अनुहार मा resveratrol लागू गर्नुहुन्छ?
के Resveratrol एक्ने लागि राम्रो छ?
के resveratrol मिर्गौलाको लागि सुरक्षित छ?
के CoQ10 ले तपाईंको मिर्गौलामा चोट पुर्‍याउँछ?
कुन खाद्य पदार्थमा उच्च रेजेराट्रोल हुन्छ?
कुन भिटामिन मिर्गौलामा कडा हुन्छ?
कुन खाद्य पदार्थले मृगौला मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ?
के Resveratrol सुरक्षित छ?
के मलबेक तपाईको मनको लागि राम्रो छ?
के Resveratrol ले टाउको दुख्न सक्छ?
रेसेराट्रोल लिनेको साइड इफेक्ट के हुन्छ?
रेवेराट्रोलको उपचार गर्न के प्रयोग गरिन्छ?
के रेवेरेट्रोलले ईस्ट्रोजेन घटाउँछ?
तपाइँको मिर्गौलामा केहि गलत छ भनेर के संकेतहरू छन्?
के म थाईरोइडको समस्याको साथ रिसेभरट्रोल लिन सक्छु?
Resveratrol को उत्तम रूप के हो?
के स्याउहरूसँग रिवेरास्ट्रोल छ?
जहाँ म थोक मा Resveratrol पाउडर किन्नु पर्छ?
Resveratrol (501०१--36-०) एक पॉलीफेनोलिक कम्पाउन्ड हो जुन धेरै बिरूवाहरूमा पाइन्छ तर प्राय: अpes्गुरमा। Resveratrol अक्सर यसको संरचनाको कारण 'स्टिलबेन' भनेर कहलाइन्छ र यो सबैभन्दा लोकप्रिय स्टिलबेन हो। स्टिलबेनहरू बोट संयोजक हुन् जुन प्राय: अpe्गुर परिवारमा पाइन्छ यद्यपि तिनीहरू अन्य बोटहरूमा थोरै मात्रामा पनि हुन सक्छन्। अpes्गुर भित्र, resveratrol छालामा अवस्थित छ र एक फाइटोलेक्सिन वा बिरुवा toxin को रूप मा काम गर्दछ, अंगूरलाई विभिन्न संक्रमण बाट बचाउँछ।
धेरै वर्षदेखि, फ्रान्सेली जनताले संतृप्त फ्याटयुक्त खाद्य पदार्थको उपभोग गर्न सक्ने क्षमताको कारण अन्वेषकहरू लाज मान्दछन् र कोरोनरी रोगबाट प्रभावित हुँदैनन्। धेरै मानिसहरूले सोच्दछन् कि रेवेरेट्राटोल हृदय रोगको यस 'फ्रेन्च प्याराडॉक्स' को जवाफ हो। सत्यमा, रातो रक्सीले यो 'फ्रेन्च प्याराडक्स' सक्षम पार्न सानो भूमिका खेल्छ। खाना र जीवनशैली यस्तै महत्त्वपूर्ण कारकहरू हुन्।
ती देशहरू जहाँ रातो वाइनको उपभोगलाई मनपर्दछ, जनसंख्या प्रति दिन ०.२ मिलीग्राम रेसेराट्रोलसम्म खपत हुन्छ। यद्यपि धेरै देशहरूमा जहाँ रेड वाइनलाई स्पेन वा उत्तर अमेरिकामा त्यति प्राथमिकता दिइएन, त्यहाँ जनसंख्या पुनःभण्डारणको अभाव रहेको छ। निर्माताहरू, विश्वभरि, यसैले रेसिभेट्रोल पूरकहरू आउँदैछन् जसले एकै पटकमा धेरै स्वास्थ्य लाभहरूको आश्वासन दिन्छ।
प्रश्न यो छ: रेवेराट्रोल यति प्रभावकारी छ कि यी पूरकहरूले दावी गरे जस्तो? हामी रेसिभेट्रोलको केहि प्रयोगहरू हेरौं।
रातो दाखमद्यले कोलेस्ट्रोल कम गर्छ, यो तथ्य हामी धेरै जसोलाई थाहा छ। यद्यपि हामी मध्ये धेरैलाई थाहा छैन कि यो प्लान्ट कम्पाउन्ड रेसेराट्रोल हो जसले कुनै सम्पत्तिलाई रातो दाखमद्य दिन्छ। रातो रक्सीको साथसाथै, रेसिभेरटोल अन्य धेरै खाद्य पदार्थहरूमा फेला पर्दछ। Resveratrol (501-36-0) पहिलो पटक १ 1939। in मा अलग गरिएको थियो र वर्षौंको दौडान, यस परिसरमा गरिएको अनुसन्धानले यसको विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरू प्रकट गरेको छ, जसको परिणामस्वरूप, यस परिसरको लागि बढ्दो मागको कारण छ। कोलेस्ट्रॉल कम गर्नु बाहेक, रेसेभेरट्रल संज्ञानात्मक कार्यलाई बढावा दिन र रक्तचाप नियन्त्रण गर्न पनि जानिन्छ।
रिसवेराट्रोलको विस्तृत लेखमा हामी यसका फाईदाहरू, प्रयोगहरू, र सुरक्षित खुराकको बारेमा छलफल गर्छौं, साथै तपाईंलाई २०२० को सर्वश्रेष्ठ रेसरेब्रटोल सप्लीमेन्टको साथै थोकमा यो बोट कम्पाउन्ड किन्ने सल्लाह पनि दिन्छौं। जे होस्, हामी पहिले आधारभूत संग शुरू गरौं।
① यसले रक्तचाप कम गर्दछ
२०१ 2015 मा, एक अध्ययनले पत्ता लगायो कि रिसवेराट्रोलको उच्च खुराकले सिस्टोलिक रक्तचाप कम गर्दछ जुन हामी रक्तचाप पठनमा माथिल्लो नम्बरको रूपमा देख्छौं। उच्च सिस्टोलिक रक्तचाप एक व्यक्तिको भलाईको लागि खतरनाक मानिन्छ किनकि यसले एक व्यक्तिमा हृदय रोगहरूको जोखिम बढाउँदछ। रिसवेराट्रोलले रगतको दाँतलाई कम नाइट्रिक अक्साइड उत्पादन गरेर कम गर्दछ जसले फलस्वरूप रक्त नलीहरूलाई आराम दिन्छ। जे होस् रिसवेराट्रोलले रक्तचाप घटाउने सुझाव दिन पर्याप्त प्रमाणहरू भए पनि सही खुराकको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ।
② यो मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन चिनिन्छ
वर्षौंको दौडान गरिएको अध्ययनले देखाएको छ कि नियमित रातो मदिराको खपतले उमेर प्रेरित संज्ञानात्मक गिरावटलाई कम गर्दछ। यो मुख्य रूपमा रेड वाइनमा रहेको रेजेरेटोलको कारणले हो। रेजवेराट्रलमा एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी र एन्टी-ऑक्सीडन्ट गुणहरू हुन्छन् र यसले बीटा-एमाइलोइड्सको काम रोक्दछ, जुन अल्जाइमरको शुरुआतका लागि जिम्मेवार हुन्छ।
③ Resveratrol विशेष गरी मधुमेह भएका व्यक्तिहरूका लागि लाभदायक हुन्छ
पछिल्ला केही वर्षहरुमा, डायबेटिसमा रेवेराट्रोलको प्रभावको अध्ययन गर्न धेरै जनावरहरुको अध्ययन गरिएको छ। जनावरहरूमा, रेवेराट्रोलले इन्सुलिन संवेदनशीलता बढाउँदछ र ग्लुकोजलाई सोर्बिटोलमा रूपान्तरण गर्ने इन्जाइमको काम रोक्दछ। सोर्बिटोल चिनी हो जसले अक्सिडेटिभ तनाव निम्त्याउँछ र मधुमेह भएका मानिसहरूलाई जटिल बनाउँछ। यो भन्दा पनि फरक छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले विश्वास गर्छन् कि रिसवेराट्रोलले एएमपीके सक्रिय गर्दछ, प्रोटीन जसले ग्लूकोजलाई मेटाबोलिजस् गर्दछ, फलस्वरूप शरीरमा चिनीको स्तर कम गर्दछ।
④ यसले क्यान्सर कोषहरूलाई दबाउन सक्छ र मानवको आयु बढाउन सक्छ
अनुसन्धानले देखाएको छ कि रेसेराट्रोलले क्यान्सर कोषहरूको जीन अभिव्यक्ति परिवर्तन गरेर शरीरमा क्यान्सर कोषहरूको बृद्धि हुन सक्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पशु अध्ययनहरूले यो पनि देखायो कि रिसवेराट्रोलले हर्मोन-निर्भर क्यान्सरको प्रसारलाई निश्चित हर्मोनहरू व्यक्त गर्ने तरिकामा हस्तक्षेप गरेर रोक्दछ।
त्यस्तै, रेवेराट्रोलको आयु बढाउने प्रभाव वैज्ञानिकहरूको बीच ठूलो छलफलको विषय भएको छ। धेरै जनावरहरूको अध्ययनमा, रेवेराट्रोलले छनौट गरिएको जनावरको आयु बढायो जुन युद्धमा लड्ने र आयुसँग सम्बन्धित बिमारहरूलाई टाढा राख्ने ज्ञात जीनहरू सक्रिय पार्दै। वैज्ञानिकहरूले मानिसमा त्यस्तै नतिजाको अपेक्षा गर्छन्। यद्यपि थप अनुसन्धान आवश्यक छ।
Ar यो गठिया र जोड्ने दुखाइको लागि प्रभावकारी उपचार हो
रिसवेराट्रोल दुबै गठिया र जोड्ने दुखाइ बिरूद्ध एक प्रभावकारी उपचार हो। यस बोटमा आधारित कम्पाउन्डले शरीरलाई संयुक्त दुखाइ र गठियाबाट बचाउँछ कार्टिलेज बिग्रनलाई ढिलो गरेर। केही पशु अध्ययनहरूले यो पनि देखाए कि रिसवेराट्रोलले जोर्नीलाई ज्वलन्त कम गराएर जोगाउँछ।
Heart यसले हृदय रोगहरूको बिरूद्ध संरक्षण प्रदान गर्दछ
Resveratrol धेरै अलग अलग तरीकाले मुटु लाई बचाउँछ। पशु अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि यो कम्पाउन्डले कोलेस्ट्रोल उत्पादनसँग जोडिएको विशिष्ट ईन्जाइमको काम बन्द गरेर मुटुसम्बन्धी रोगहरूबाट जोगाउँछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, रेजवेराट्रलमा एन्टीआक्सीडन्ट गुणहरू हुने भएकोले यसले एलडीएल कोलेस्ट्रोलको अक्सीकरण घटाउँछ, जो मुख्य रूपमा धमनी पर्खालमा प्लेक निर्माणको लागि जिम्मेवार छ।
यसले रासायनिक, कोलेस्ट्याटिक र रक्सीको घाउ बिरूद्ध कलेजो सुरक्षा प्रदान गर्‍यो। Resveratrol ले ग्लुकोज मेटाबोलिजम र लिपिड प्रोफाइल सुधार गर्न सक्दछ र कलेजो फाइब्रोसिस र स्टीटोसिस घटाउँदछ। यसबाहेक, यसले हेपाटिक सेल फ्याट्टी एसिड संरचना बदल्नको लागि सक्षम थियो।
Foods फूडहरू बचाउन यदि तपाईं एक फ्याटि कलेजो छ भने
रक्सी मोटो कलेजोको रोगका साथै अन्य कलेजो रोगहरूको प्रमुख कारण हो।
चिनी थपियो। मिठाई खानेकुराबाट टाढा रहनुहोस् जस्तै क्यान्डी, कुकिज, सोडास र फलफूल जुसहरू।
फ्राइड फूडहरू। यसमा फ्याट र क्यालोरी उच्च हुन्छ।
सेतो रोटी, चामल, र पास्ता।
एक स्वस्थ लिभरको १ 13 तरिकाहरू
सन्तुलित आहार खानुहोस्।
विषाक्त पदार्थहरू हटाउनुहोस्।
जिम्मेवार ढंगले मदिरा प्रयोग गर्नुहोस्।
अवैध लागूऔषधको प्रयोगबाट जोगिनुहोस्।
दूषित सुईहरू जोगिनुहोस्।
यदि तपाईं रगतको संपर्कमा हुनुहुन्छ भने चिकित्सा स्याहार लिनुहोस्।
व्यक्तिगत स्वच्छता वस्तुहरू साझा नगर्नुहोस्।
सुरक्षित यौन अभ्यास गर्नुहोस्।
आफ्नो हात धोऊ।
सबै औषधिहरूको दिशा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
मधुमेह नेफ्रोपैथी, औषधि प्रेरित गुर्दे चोट, एल्डोस्टेरोन प्रेरित गुर्दा चोट, ईस्केमिया-रिप्रफ्यूजन चोट, सेप्सिस-प्रेरित गुर्दामा चोट, र बाधा अड्काइ मिल्दा, एन्टीऑक्सीडन्ट प्रभावहरू र SIRT1 सक्रियता सहित रेसवेराट्रलले रेनल चोटपटक रोक्न सक्छ।
बदाम बटर: बदामको बटर स्याउ र सेलेरी बनाउनका लागि उत्कृष्ट छ, तर यसले केहि रिसिभेरोल (१ कप मिह्रा प्रति कप) सम्मिलित गर्दछ। बदाम बटर नियासिन र मैंगनीजको उत्तम स्रोत हो।
समग्रमा, हालको मेटा-विश्लेषणले प्रदर्शन गर्‍यो कि रिसेराट्रोल सेवनले तौल, बीएमआई, डब्ल्यूसी र फ्याट द्रव्यमानलाई कम गर्‍यो, र दुबै जनावरमा उल्लेखनीय बृद्धि भयो, तर लेप्टिन र एडिपोनेक्टिन लेभलमा प्रभाव पार्दैन।
रेवेराट्रोलले छालाको अवरोध सजिलैसँग प्रवेश गर्न सक्दछ र सक्रिय रूपमा छालाको बुढ्यौली प्रक्रियालाई धीमा गर्दछ। रेजेराट्रलमा एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी, एन्टि-माइक्रोबियल, र एन्टीआक्सीडन्ट गुणहरू पनि हुन्छ, जसले गर्दा तपाईंको छाला स्वस्थ रहन्छ र ब्रेकआउट र ईन्फ्लेमेसनबाट मुक्त हुन्छ।
रेसभेराट्रल रातो अpes्गुर र अंगुरबाट बनेको रातो दाखमद्यसँग जोडिएको छ। मलबेक, पेटाइट सिराह, सेन्ट लॉरेन्ट र पिनोट नोइर जस्ता मदिरामा सब भन्दा बढि रेसिरेट्रल सामग्री हुन्छ।
Resveratrol लाई क्यालोरी प्रतिबन्धको नक्कल गर्ने रूपमा वर्णन गरिएको छ, जसले सुधारिएको व्यायाम प्रदर्शन र इन्सुलिन संवेदनशीलता (ऊर्जा खर्च बढाउँदै), साथै एडिपोजेनेसिसलाई रोकेर शरीरमा बोसो घटाउने प्रभाव, र एडिपोज टिश्युमा लिपिड गतिशीलता बढाउँछ।
रेवेराट्रोलले विरोधाभासी रूपमा प्रोटीन अक्सिडेशन गराएर रक्तचाप घटाउने मध्यस्थता गर्छ, विशेष गरी अक्सिडेटिभ तनावको समयमा एन्टिऑक्सिडन्ट अणुहरूको सामान्य सुविधा हुन सक्ने एक यस्तो प्रविधि।
तपाईं पहिले देखि नै resveratrol को एक उचित मात्रा उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो बदाम, पिस्ता, अंगूर, रातो र सेतो वाइन, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, र कोको र डार्क चकलेट जस्ता खानामा फेला पर्दछ। यी खानाहरू आउने बोटहरूले फgal्गल इन्फेक्सन, पराबैंगनी विकिरण, तनाव र चोटपटकसँग लड्न रिसवेराट्रोल बनाउँदछन्।
क्वेरेसेटिन स्याउ, मह, रास्पबेरी, प्याज, रातो अpes्गुर, चेरी, सिट्रस फल, र हरियो पातदार तरकारीहरूमा प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। तरकारी र फलफूलका बीच प्याजमा क्वेरसेटिन सामग्री सब भन्दा बढी हुन्छ। बल्ब र color र प्रकार प्याजमा क्वेर्सेटिन एकाग्रताका लागि निर्धारण कारक देखिन्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाए कि कुल टेस्टोस्टेरोनको स्तर २ 23.1.१ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। तुलनात्मक रूपमा, टेस्टोस्टेरोनको स्तर प्लेसबो समूहमा २.2.9 प्रतिशतले वृद्धि भयो।
तपाईंको दैनिक खानाको साथ किशमिशको स्वस्थ सेवनले तपाईंलाई फलामको कमीबाट बचाउन सक्छ। यी सुकेका अpes्गुरहरू क्यालोरीहरूमा अत्यधिक कम हुन्छन् र स्वाभाविक रूपमा मीठो हुन्छन्। तिनीहरू पनि एकदम रेशेषित छन्, यसैले, शरीरलाई सानो सेवाको साथ लामो समयको लागि महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
जब 1500 महिना सम्म दैनिक १ 3०० मिलिग्रामसम्म खुराक लिईन्छ, रेसेराट्रल POSSIBLY SAFE हो। २०००--2000००० मिलीग्रामसम्मको उच्च खुराक २--3000 महिनाको लागि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यद्यपि, रिभ्रेट्रोलको यी उच्च खुराकहरूले पेट समस्याहरू निम्त्याउने सम्भावना बढी हुन्छ।
रेसेभ्राट्रोलले एन्ड्रोजेन पूर्ववर्तीको स्तरहरू कम गर्दछ तर टेस्टोस्टेरोन, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, पीएसए स्तर वा प्रोस्टेट भोल्युममा कुनै प्रभाव पार्दैन।
केहि अनुसन्धानले देखाउँदछ कि रेसेराट्रोललाई कम जोखिममा जोड्ने सम्भावना र रगत जमाउनु हो, जसले तपाईको हृदय रोगको जोखिम कम गर्न सक्छ। तर अन्य अध्ययनहरूले हृदय रोग रोकथाममा रेजेराट्रोलबाट कुनै फाइदा पाएनन्।
सामयिक रूपमा लागू गरिएको, resveratrol ले छालाको सतहलाई बचाउन मद्दत गर्दछ, अवरोधहरू र नकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरूलाई अस्वीकार गर्न मद्दत गर्दछ, र थकित देखिने रंगलाई उज्यालो बनाउँछ। यसमा महत्त्वपूर्ण छाला-शान्त गुणहरू पनि छन् जसले रातोपनलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
उपयुक्त रेवेरेट्रोल डोज पूरक लिईएको कार्यमा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, सेरेब्रल रगत प्रवाहको लागि पूरक व्यक्तिले २ 250०--500०० मिलीग्रामको दायरामा रेसेराट्रोल खान्नु पर्छ जबकि अरोमाटेज निषेधको लागि तोकिनुपर्दा, दायरा प्राय: एक दिन .०० मिग्रा वरिपरि राखिन्छ।
कार्डियोभास्कुलर स्वास्थ्य सुधार गर्न वा दीर्घायु बढाउन रिसवेराट्रोल लिने स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको खुराक १-150०- mg445 mg मिलीग्राम बीचमा राख्न सल्लाह दिइन्छ। जहाँसम्म, कुनै पनि अराजकबाट पीडित व्यक्तिलाई प्रति दिन -5-१०mg मा कम खुराक राख्न सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाईं कुनै अवस्थाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, कुनै पनि औषधि सुरू गर्नु अघि तपाईको डाक्टरसँग परामर्श गर्न नबिर्सिनुहोला।
पशु अध्ययन र क्लिनिकल परीक्षणहरूमा, १% रेसेराट्रोल UV द्वारा प्रेरित pigmentation लाई कम गर्न देखा पर्‍यो जब यो छालामा topical लागू गरिन्छ। Rveveratrol एनालग, RTA र RTG, पनि परीक्षण सांद्रता (०%% आरटीए, ०.%% आरटीए र ०.%% RTG) मा नैदानिक ​​परीक्षणमा मानव छाला लाईइटनिंग प्रभाव देखायो।
ग्रीनले सेरमहरूको लागि भन्छ, तपाईले सफा गरेपछि यसलाई लागू गर्नुहोस्, वा यदि तपाईले आफ्नो स्किनकेयर रुटिनमा टोनर प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईले त्यो चरण पछि त्यसलाई लागू गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं मोइस्चराइजरमा रेसिभेट्रोल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सफा र टोनिंग गरेपछि, दुई पटक दैनिक, बिहान र साँझपश्चात् लागू गर्नुभयो।
अ An्गुर र रातो दाखमद्यमा फेला परेको रेसवेराट्रोल नामक एन्टिऑक्सिडन्टले असंगत ब्रेकआउट्स खाली गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, यूसीएलएको नयाँ अध्ययनले फेला पारे। जब अन्वेषकहरूले एन्टिआक्सीडन्ट रेसेराट्रोललाई एक्ने-पैदा गर्ने ब्याक्टेरियाको तनावमा लागू गरे, तिनीहरूले पत्ता लगाए कि यसले पिम्पल उत्पादन गर्ने बगहरूको निरन्तर समयको लागि रोक लगायो।
CoQ10 बाट साइड इफेक्ट दुर्लभ र हल्का देखिन्छ। तिनीहरूमा पखाला, मतली, र ईन्डर्न जोखिमहरू। हृदय विफलता, मिर्गौला वा कलेजो समस्या, वा मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन रोगहरू यस पूरक प्रयोग गर्नदेखि सावधान हुनुपर्छ।
यो बदाम, पिस्ता, अंगूर, रातो र सेतो वाइन, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, र कोको र डार्क चकलेट जस्ता खानामा फेला पर्दछ। यी खानाहरू आएका रूखहरूले फ fun्गल इन्फेक्सन, पराबैंगनी विकिरण, तनाव र चोटपटकसँग लड्न रिसवेराट्रोल बनाउँदछन्।
बोसो घुलनशील भिटामिन (A, D, E र K) तपाईको शरीरमा निर्माण हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले किडनी डाक्टरले सिफारिस नगरेसम्म यी हटाइन्छन्। भिटामिन ए विशेष गरी चासोको विषय हो किनकि विषाक्त स्तर दैनिक पूरकहरूको साथ देखा पर्न सक्छ।
गाढा पत्ते साग
प्रतिदिन १ 1500०० मिग्रि सम्म मुखमा लिने रेसवेराट्रोललाई सुरक्षित मानिन्छ। सेवनको अवधि, तथापि, months महिना भन्दा बढी हुनुहुन्न। २०००--3००० मिलीग्राम दैनिक दायरामा अधिक डोज लिन सकिन्छ तर तिनीहरूलाई पेटको समस्याहरूको कारण चिनिन्छ।
गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलाले सानो मात्रामा रेसेराट्रोल पूरक लिनु पर्छ। जहाँसम्म, तिनीहरूले कोशिस गर्नु पर्छ र प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै अpe्ग्रेको छाला र अpe्गुरको जुसबाट उनीहरूको आवश्यक रिभ्रेट्रोल खुराक लिनु पर्छ। रक्सी यस समूहले खपत गर्नु हुँदैन।
ब्लीडिंग डिसआर्डरबाट पीडित व्यक्तिहरू रेवेराट्रोलबाट टाढा रहनु पर्छ किनकि यसले रगत जम्मा पार्छ। त्यस्तै, डिम्बग्रन्थि, गर्भाशय, वा स्तन क्यान्सर जस्ता हर्मोन-संवेदनशील अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिहरू पनि पुनःभेट्रोल सप्लीमेन्टबाट टाढा रहनै पर्छ।
माल्बेक अ gra्गुरमा सबै दाखमद-अ varieties्गुरका प्रजातिहरूको केही बाक्लो छाला हुन्छ। यसको मतलव तिनीहरू रेवेराट्रोल एन्टिआक्सिडन्टहरूसँग भरिएका छन् जुन हृदय र प्रतिरक्षा स्वास्थ्यको लागि महत्वपूर्ण छ।
हामीले देखाएका छौं कि रिसवेराट्रोलले एन्डोथेलियल भासोडिलेटर प्रकार्य बढाउँदै कार्य गर्दछ, जसले अरूलाई रेड वाइनमा रेस्राभेट्रल माइग्रेनको एक कारण हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ।
Resveratrol का छोटो-अवधि खुराक (१.० g) का साइड इफेक्टहरू देखा पर्दैन। अन्यथा, प्रति दिन २. g g वा अधिकको खुराकमा, साइड इफेक्टहरू देखा पर्न सक्छ, जस्तै मतली, बान्ता, पखाला र जिगर डिसफंक्शन बिरामीहरूमा गैर अल्कोहलयुक्त फ्याट लिभर रोगसँग
रेवेराट्रोलको बढ्दो लोकप्रियतालाई यस उत्पादनको विभिन्न प्रयोगहरूमा श्रेय दिन सकिन्छ। वयस्क व्यक्तिको वजन घटाउने साथसाथै राम्रो छालालाई बढावा दिन्छ रेसवेराट्रोल पूरक। रेसवेराट्रोल पूरकहरू, जब कसरत अघि लिइन्छ, तीव्र व्यायामसँग सम्बन्धित फाइदाहरू पनि बढाउँछन्। अनुसन्धानले यो पनि प्रमाणित गरेको छ कि रेसेभेट्रोलले रगत ग्लुकोज घटाउँछ र रगत प्रवाह सुधार गर्दछ। यसले इन्सुलिन संवेदनशीलता बढाउँदछ र यसैले मधुमेह पीडित व्यक्तिहरूको लागि राम्रो पूरक मानिन्छ। यसले ट्राइग्लिसराइड्स घटाएर हृदय स्वास्थ्यलाई पनि बढावा दिन्छ। अन्तमा, यसले क्यान्सर कोषहरूको क्रियाकलापलाई घटाउँदछ र पुरानो गठिया र संयुक्त पेन्टको बिरूद्ध एक प्रभावकारी उपचार हो।
Resveratrol सेल संस्कृति प्रणालीहरूमा ER-सकारात्मक र नकारात्मक स्तन क्यान्सर कोशिकाहरूको प्रसारलाई दबाउन देखाइएको छ। यसले कोशिकाका प्रकारहरू, एस्ट्रोजेन रिसेप्टर आइसोफर्म, र अन्तर्जात एस्ट्रोजेन्सको उपस्थितिको आधारमा एस्ट्रोजेन एगोनिस्ट वा विरोधीको रूपमा कार्य गर्दछ।
तपाईले कति धेरै पेशाब गर्नुहुन्छ भन्नेमा परिवर्तन।
पेशाब फोम, रगत, कलol्ग, वा खैरो छ।
पिसाई गर्दा पीडा
तपाईको आखा, कलाई, खुट्टाहरू, हड्डीहरू, तपाईंको आँखा, अनुहार, वा पेट वरिपरि सूजन।
निद्राको बखत खुट्टा।
जोड़ वा हड्डी दुखाई।
मध्य-पछाडिको दुखाइ जहाँ मिर्गौलाहरू अवस्थित छन्।
तपाईं सबै समय थकित हुनुहुन्छ।
यी डाटाले संकेत गर्दछ कि रेवेराट्रल एनआईएस अभिव्यक्तिको अवरोधक हो र सामान्य थाइरोइड सेलहरूमा कार्य गर्दछ। यसबाहेक, रिसेभरट्रोलको थाइरोइड विघटनकर्ताको भूमिका छ, र यसरी हामी रिभ्राभेट्रोलको ठूलो मात्राको सेवनको साथ सावधानी अपनाउने सल्लाह दिन्छौं।
रातो वाइनसँग खानाको लागि रेवेराट्रोलको स concent्द्रता सबैभन्दा बढी हुन्छ। यो रातो दाखमद्य बनाउन किण्वनमा अ gra्गुरको छाला खर्च गर्ने समयको लागि धन्यवाद छ। रेड वाइनमा रेजेराट्रोलको उपस्थिति एक कारण हो जुन तपाईंले सुन्नुभयो होला यो मुटुको स्वस्थको रूपमा छ।
वाशिंगटन स्टेट युनिभर्सिटीका अन्वेषकहरूको टोलीले पत्ता लगाए कि अve्गुर, ब्ल्याकबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रबेरी र स्याउ, रेसवेराट्रोलमा धनीले बढी बोसो जलाउँछन्। यहाँ कसरी छ। मोटोपनालाई रोक्न र उपचार गर्नको लागि नयाँ रणनीति धेरै फलहरूमा फेला परेको एन्टिऑक्सिडन्टमा पर्दछ: रेसेराट्रॉल।
मानिसहरू रेशेराट्रोलको फाइदाहरूको बारेमा बढी सचेत हुँदै जाँदा बजारमा रेसेराट्रोल सप्लीमेन्टहरूको माग बढेको छ। यसले विनिर्माण कम्पनीहरूले बजारमा सेयर पाउन उच्च गुणवत्ताको पूरक उत्पादन गर्न एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यदि तपाईं स्वास्थ्य पूरक निर्माता हुनुहुन्छ भने रिसवेराट्रोल पूरक बजारमा फोर्न योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंले उच्च-गुणस्तरको रेसिभेट्रोल पाउडर पाउनुहुनेछ। राम्रो-गुणवत्ताको सामग्री सोर्सिंग कुनै पनि व्यवसायको सफलता सुनिश्चित गर्न पहिलो कदम हो।
यदि तपाईं स्थान खोज्दै हुनुहुन्छ भने resveratrol पाउडर किन्नुहोस् थोक मा, एक कम्पनी तपाईं अन्धाधुन्ध कच्चा माल सोर्सिंग को लागी विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ Cofttek हो। कम्पनीले आफ्नो कडा अनुसन्धान टोली र समर्पित बिक्री विभागको कारणले विश्वव्यापी उपस्थिति थोरै समयमै स्थापित गरेको छ - यसका ग्राहकहरू र विश्वव्यापी साझेदारहरू छन्। कम्पनी द्वारा उत्पादित रेसिभेट्रोल २ 25 किलोग्रामको ठूलो ब्याचमा आउँदछ र उच्च-गुणस्तरका सामग्रीहरूबाट खनिन्छ, जसले गर्दा सुनिश्चित गर्दछ कि यसबाट उत्पादित पूरकहरू गुणस्तर र प्रभावकारिताका लागि विश्वास गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं बल्कमा रेसेराट्रोल खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने किनमेल गर्ने ठाउँ मात्र cofttek.com हो।
(1) सोनिया एल। रामरेज-गर्जा, एमिली पी। लाभेरियानो-सान्टोस, मारिया मार्हुन्डा-मुजोज, क्यारोलिना ई। स्टोर्नियोलो, अन्ना ट्रेसेरा-रिम्बाउ, अन्ना भल्भरडा-क्य्राल्ट र रोजा एम। लामुएला-राभेन्टस १ (२०१)) Resveratrol को स्वास्थ्य प्रभाव: मानव हस्तक्षेप परीक्षणबाट परिणाम, पौष्टिक १०.१० (१२)
(2) बहारे सालेही, अभय प्रकाश मिश्रा, मनीषा निगम, बिल्गे सेनर, मेहताप किलिक, मेहदी शरीफी-रड, पैट्रिक भालेरे त्सोह फोकउ, नटेलिया मार्टिन्स, र जावद शरीफि-रड (२०१)) Resveratrol: स्वास्थ्य लाभहरु मा एक दोहोरो तरवार।6(3)।
()) आदि वाई बर्मन, रचेल ए मोटेचिन, मैया वाई वासेनफेल्ड र मारिना के। होल्ज (२०१ 3) रिसवेराट्रोलको चिकित्सीय सम्भावना: क्लिनिकल परीक्षणहरूको समीक्षा, एनपीजे प्रेसिजन ओन्कोलॉजी भोल्यूम १, लेख संख्या:: 1 ईडीएन।
(4) Resveratrol (501०१--36-०)
(5) यात्रा अन्वेषण को लागी उदा।
(6) Oleoylethanolamide (oea) - तपाईंको जीवनको जादुई छडी।
(7) आनंदमाइड बनाम सीबीडी: कुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि उत्तम छ? तपाईंले उनीहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा!
(8) निकोोटोनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडको बारेमा तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा।
(9) म्याग्नेशियम l-थ्रोनेट पूरक: लाभ, खुराक, र साइड इफेक्ट।
(10) Palmitoylethanolamide (मटर): लाभ, खुराक, प्रयोग, पूरक।
(11) फास्फेटिडेल्सेरिन (PS) लिनका शीर्ष benefits लाभहरू।
(12) पायरोलोक्विनोलिन क्विनोन (pqq) लिने शीर्ष5फाइदाहरू।
(13) अल्फा gpc को सबै भन्दा राम्रो nootropic पूरक।
(14) निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) को उत्तम एन्टी एजिंग पूरक।